Antenimieran’ny Varotra sy Indostria Hametraka ny toerana tokana fandefasana entana
Hetsika FIA andiany fahatelo Sahirana amin’ny lalam-barotra ny orinasa Malagasy
Nisokatra omaly tetsy amin’ny Zone forello Tanjombato ary haharitra efatra andro ny Foara iraisam-pirenen’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono FIA andiany fahatelo.
Teknolojia avo lenta Mbola vitsy ny orinasa sahy miroso
Tanteraka omaly tetsy amin’ny La Vallée Ampahibe ny fifanaraham-piaraha-miasa tamin’ny orinasa mpamatsy vola Miarakap sy ny Hairun Technology.
Tanora sy ny fandraharahana Tena ilaina ny fisian’ny Banky
Miainga amin’ny tanora ny fampandrosoana ny firenena ary maro amin’izy ireny no manana tetikasa saingy olana hatrany ny fahazoana famatsiam-bola.
Fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina Ho entitra ny fanaraha-maso
17 ny isan’ny seranana eto Madagasikara ary 7 amin’izay no misehatra eo amin’ny iraisam-pirenena.
Vitrine du Vakinankaratra Tanjona ny fikarohana lalam-bokatra
Hisongadina indray ireo vokatra mampalaza an'i Vakinankaratra amin’ny ny hetsika « Vitrine du Vakinankaratra » andiany faha-22 izay hotontosaina rahampitso 12 septambra ka hatramin'ny 14 septambra 2019 ho izao. Hatao manoloana ny Gara izany ary hampirantiana tranoheva miisa 200.
Nikela eto Madagasikara Nihem-bidy nefa nampidi-bola
Nahitana fitomboany 24,2 tapitrisa dolara ny vola nampidirin’ny fanondranana Nikela tao amin’ny kitapombolam-panjakana nandritra ny 3 volana voalohan’ity taona 2019 ity raha ny tatitra navoakan’ny banky foiben’i Madagasikara (BFM).
Harinkarena eny ifotony Tena ilàna fampiofanana
Atrikasa fanofanana ho an’ireo mpanofana no nokarakarain’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena( FAO) tetsy amin’ny Hotely Colbert Anataninarenina omaly.
Nisy ny fanatanterahan’ny delegasion’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indositria iraka tany Kenya. Anisan’ny firenena be traikefa eo amin’ny lafiny fandraharahana sy ny fanondranana i Kenya, antony nifidianan’izy ireo azy.
Anisan’ny tanjona tamin’ny dia ny fametrahana ny toerana tokana ho fanondranana entana (Guichet Unique à l’Exportation na GUE). Hatao fitaratra voalohany amin’izany ny faritra Anosy sy SAVA ary fiaraha-miasa amin’ny tetikasa TRF izay tohanan’ny SADC no nahatontosana izany. Hiteraka tombony ara-toekarena ho an’i Madagasikara ny fametrahana ny GUE amin’ny maha mpikambana antsika ao amin’ny SADC sy COMESA satria efa misy 21 eo ny firenena tsy mandoa hetra ao amin’ny sehatra fanondranana. Hisy ihany koa ny foara ara-toekarena handraisan’i Madagasikara anjara hifanakalozana ara-barotra. Tanjona ihany koa ny fanamorana ny fivezivezen’ny vokatra ao amin’ny tsena SADC sy COMESA amin’ny hetra ambany. Manoloana ny fiatrehana io GUE io dia hisy ny fanofanana ny mpandraharaha Malagasy, hoy hatrany ny teo anivon’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria.